I-Lab Series Max LS, yamadoda afuna ngenkani | Amadoda aSitayela
I-Lab Series Max LS, yamadoda afuna ngenkani
ULucas garcia | | Izimonyo, Indlela yokuphila
Ukube bekufanele ngichaze ukuthi kuyini Ubukhulu be-LS Ngingasho ukuthi yi- phezulu-ukuphela Kwezokwelapha zeLab Series For Men.
Kade ngivivinya imikhiqizo emithathu ebangeni izinsuku ezimbalwa: i-contour yeso (i-Instant Eye Lift), i-serum yokulungisa ebusuku (i-Overnight Renewal Serum) ne-moisturizer (i-Age-Less Face Cream). Umphumela ubonakala impela, uyabonakala ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuqala ukusebenzisa imikhiqizo. Asihambe ngezingxenye.
El iso lezinwele Kuyamangaza, mhlawumbe kwabathathu yilokho engikuthande kakhulu futhi okungazukushoda esikhwameni sami sezinto zangasese. I- imiphumela iyashesha futhi umuzwa wokwenza kabusha nokwenza kusebenze kumnandi kakhulu.
Ukupakisha kuyamangaza ngoba ulindele ibhodlela elijwayelekile kepha unalo umfakisicelo, into ewusizo impela. Ukuthungwa kulungile, akubikho uketshezi kakhulu noma kuminyene kakhulu, kulungele ukunambitheka kwami. Ukuze gcoba umugqa wamehlo kumele sikwenze ngokunikeza ngokucophelela ukuthinta okuncane kusuka ku-lacrimal kuya kuyo yonke indawo yomugqa wamehlo (futhi ngejwabu leso) futhi uma kungenzeka ngomunwe wendandatho, okuwumunwe onamandla amancane ngakho-ke sizowusebenzisa ngobumnene nangempumelelo.
El ukulungisa serum Mhlawumbe kungenye yezengezo amadoda abhekana nazo enkambisweni yethu yansuku zonke. Ngokwami, ngenza okuhle, imiphumela iyabonakala impela kusukela lapho isebenza ebusuku lapho isikhumba sikhululekile futhi siphumule futhi sivuka ngobuso obuphapheme ngokwengeziwe. Yize le seramu yeLab Series MAX LS inokuthambeka okuncane okokunambitheka kwami, umphumela muhle kakhulu nokuthi ekugcineni yilokho okubalulekile. Njengomugqa wamehlo, kuyinto ukwelashwa okulwa nokuguga, okungasho ukuthi kuyinto elwa nemibimbi, kumane kusisize ukugcina isikhumba sethu sincane. Ngikusho ngoba amadoda amaningi abona ukulwa nokuguga futhi acabange ukuthi kuyinto elwa nemibimbi futhi awayidingi.
Futhi ekugcineni i- umswakama, mhlawumbe ukukhetha okunzima kakhulu kwesikhwama sethu sezindlu zangasese ngoba kungumkhiqizo osetshenziswa kakhulu futhi unomncintiswano omkhulu emakethe. Kukhilimu olwa nokuguga, umphelelisi ophelele ukulungisa serum Njengoba ngemuva kokulungisa isikhumba ubusuku bonke, siyasisebenzisa futhi sisinikeze amanzi ukuze simelane nokuhlaselwa kwangaphandle kosuku nosuku. Ngiyithande kakhulu imizwa, ihlala isikhathi eside kakhulu, futhi into enhle kakhulu ngomkhiqizo ngokungangabazeki ukuthungwa, itholwa ngaphambi kokuba uyiqede ukuyisebenzisa, iyaziswa kakhulu! Kufanele ngiqhubeke ngiyisebenzise ngoba umphumela uzobonakala ngokwengeziwe ngokuhamba kwezinsuku. Ngizokutshela ngakho!
Ngijabule kakhulu ngemiphumela yale Max LS, ukuthi yize ngijabule ngeminye imikhiqizo, ngemuva kokuyihlola ngokujulile, ingimangazile. Uma ungazi umugqa we-MAX LS we Uchungechunge Lwele Kwabesilisa mhlawumbe sekuyisikhathi sokuzama.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » I-Lab Series Max LS, yamadoda afuna ngenkani
UBernardo duque kusho
Sawubona! Ngiyabonga ngale ndatshana. Ngingathanda ukuthi othile angitshele ukuthi ngingaqala nini ukusebenzisa lo mkhiqizo ukuthi ngineminyaka emingaki, ngineminyaka engama-25 ubudala futhi ngicabanga ukusebenzisa okhilimu abathile!
Phendula uBernardo Duque
ULucas Garcia kusho
Sawubona Bernardo, awunankinga, le mikhiqizo izokulungela ukuqala ukuvimbela izimpawu zokuguga.
Phendula uLucas García
Amateki ama-New Converse DC Comics
Isitayela sedwala. Ungalokotha?